साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा नपाइने | नेपाली पब्लिक साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा नपाइने | नेपाली पब्लिक
साउन १ देखि प्यान अनिवार्य, १ हजारभन्दा माथिको पारिश्रमिक नगदमा नपाइने
उद्योगी व्यवसायीद्वारा सच्याउन माग
नेपाली पब्लिक २०७६, ३१ असार मंगलवार १९:३८
काठमाडौँ – साउन १ गते अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्षको शुरूको दिनदेखि सरकारले कर्मचारी तथा कामदारलाई ‘स्थायी लेखा नम्बर’ प्यानमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेको छ। स्थायी लेखा नम्बर नभएको १ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्यको बीजकबापतको खर्च कट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले प्यान अनिवार्य गरेको हो। उक्त व्यवस्थासँगै अब भोलिदेखि प्यान नम्बर नभएकाको तलब तथा काम गरेको पारिश्रमिक रोकिने भएको छ।
अब यो व्यवस्था आएसँगै अब कुनै पनि फर्म, निकाय वा कार्यालयले प्यान नम्बरबिना तलब वा ज्याला दिन नपाउने भएका छन्। यसअघि उनीहरूले दिने तलब वा ज्याला लेखा परीक्षण गर्दा खर्चमा लेख्ने गरिरहेका थिए। तर अब प्यान नम्बर बिनाको कर्मचारीलाई तलब दिएको छ भने त्यस्ता कम्पनीले त्यो खर्चलाई खर्चको रूपमा देखाउन नपाउने भएका छन्। कुनै पनि कर्मचारीलाई तलब बैङ्क खातामार्फत् दिनुपर्ने भएकाले प्यान अनिवार्य हुनेछ।
अबदेखि १ हजार रुपैयाँभन्दा कम पारिश्रमिक मात्र नगद भुक्तानी दिन पाइनेछ। आर्थिक सर्वेक्षणमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दिएको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठान रहेका छन् भने हालसम्म ९ लाख जनाले प्यान नम्बर लिएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीद्वारा विरोध
सरकारले भोलिदेखि लागू गरेको यो व्यवस्थाको सरोकारवालाहरुले ‘अपरिपक्व निर्णय’को संज्ञा दिँदै त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले १ हजार रुपैयाँको सिलिङ अत्यन्तै कम भएको बताएका छन्। यो व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ५ हजारभन्दा बढीको पारिश्रमिकलाई मात्र प्यान अनिवार्य गर्नुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ।
नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाे बताएकाे छ भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि विज्ञप्ति जारी गरेरै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। उसले निर्णय ठीक भए पनि पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको बताएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शकाे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको भुक्तानीमा अनिवार्य प्यान नम्बर उल्लेख भएको बिल जारी गरिनुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन, १ हजार रुपैयाँको सिलिङलाई सच्याएर ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिलमा प्यान नम्बर अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले असल उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्थालाई पर्याप्त तयारी गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यो व्यवस्था राम्रो भए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाँदा प्राविधिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन्छ।’
महासंघका अर्का उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी एक्लौटी ढंगले यो व्यवस्था ल्याएको बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेस अग्रवालले सरकारले पारिश्रमिकको सिलिङ १ हजार निकै कम भएको र यसलाई कम्तिमा ५ हजार रुपैयाँ राखिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘कामदारलाई कुनै सामान बोक्न लगाउँदा कम्तिमा पनि १५ सय लिन्छन्। यो अवस्थामा के गर्ने ? उनीहरूलाई काम नै नदिनु त ?’
आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले सरकारले अध्ययन गरेरै यो व्यवस्था ल्याएको जिकिर गरे। पारिश्रमिक पाउने सबै व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन र कारोबार एवं व्यावसायिक संस्थाले गर्ने कर्मचारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।
प्यान लिनका लागि अनलाइन फाराम कसरी भर्ने ?
आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट www.ird.gov.np खोली Taxpayer मा क्लिक गर्ने, त्यसपछि Registration मा जाने र एप्लिकेसन फर रजिष्ट्रेसनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि नाम र थर भएको बक्स आउँछ, त्यसमा आफ्नो नाम र थर लेख्ने। त्यसपछि युजर नेममा आफूले सम्झने नाम र पासवर्ड हाल्नुहोस् र फेरि अर्को बक्स रि–पासवर्डमा त्यही अघि राखेको पासवर्ड राख्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर र इमेल ठेगाना राख्नुहोस्। कुन कार्यालयबाट प्यान नम्बर लिने हो, सो ठेगाना आईआरओ नम्बरमा खुलाउनुहोस्। त्यसपछि ओके बटनमा थिच्नुहोस्।
यति गरेपछि तपाईंको व्यक्तिगत विवरण माग्नेछ। सोअनुसार भर्दै जानुहोस र सबमिट गर्नुहोस्। सबमिट भएपछि सबमिट र सेभ अप्सन इनेबल हुन्छ। त्यसपछि प्रिन्टमा थिचेर त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुहोस्। सोही प्रिन्ट लिएर सम्बन्धित कार्यालयमा जानुहोस्। कार्यालयले तपाईंलाई विवरण जाँच गरेर प्यान नम्बर दिनेछ। यसका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन।
वैदेशिक स्रोतको रकम फुकुवा नहुँदा…
कर्मचारीको खातामा तलब छैन, तनाव…
कर्मचारीको तलब बढ्यो, कसले कति…
तीन महिनादेखि तलब पाएनन् अस्पतालका…
सामाजिक काममा तलब खर्चिंदै बागलुङ जैमिनी…